Nhau - Indasitiri Ruzivo
Grate Bar, Roller & Kubereka, kamwene, Rack yemarara kupisa michina.
Roller & Kubereka
Pombi & mavharuvhu zvikamu
Iron Iron + Ductile Simbi
Isina-ferrous simbi castings
Mhangura, Brass & Nickel Bronze castings
kukanda kumisikidza mabhureki
kukanda kumberi kwemasiraidhi njanji
kukanda latch base
Ngoro & Rori kuturika zvikamu
Ngoro & Rori akamedura hurongwa zvikamu
Ngoro & Rori bracket outrigger kuwedzerwa
Injini inokwira Volvo Penta
Kunwa / Kuneta zvakawandisa
Gear bos shandura forogo
Kuvaka & Kuvaka materail
Plumbing & Drainage zvigadzirwa
Kwete-hubhu pombi, zvigadzirwa, coupling
scaffoldings, ledger magumo, nzungu, wedge, rossette
Zvishongedzo zvekushongedza zvikamu, yakachera simbi + simbi zvikamu
Moto Kurwisa Zvishandiso & Spare zvikamu
Electtric magetsi anowana zvikamu
Equipment kupembedza zvikamu
Al, Stainless simbi, Cast simbi, Bakelite ruoko mavhiri
Stainless Simbi castings
Zvekugadzirwa kwenzvimbo isingagadzike ngura mudunhu renzvimbo inosangana neyakaipisa gasi yekupisa bhaira yesimbi yakakandwa, zvikamu zvinoenderana zvechikamu chekukanda zvinorapwa neyakagezwa dema ine chinhu chekukwirisa, kunyanya 40- 50% ferrosilicon, iyo inoshandura nzvimbo yekumucheto yeiyo isati yasimbiswa simbi yekukanda kuita ganda risingadzivirwe ganda
Iko kudiwa kwekutonga kweasina kugadzirwa kwakakosha mukubudirira kwesimbi yekukanda kugadzirwa kubva kumagreenand masisitimu. Iyo yepasi silica jecha inowanzo kufuratirwa neinotarisa zvakanyanya kune bentonite yekuwedzera. Carbonaceous additives inogona kutariswa se "zvakaipa zvakafanira" kuve nechokwadi chepamusoro pekupedzisa uye kudzikiswa mune jecha zvine hukama pamusoro pehurema Zvimwe zvinowedzerwa zvinoshandiswa kana masisitimu abuda muchiyero uye izvi zvinowedzera zvinowedzera kune hwakaomarara hunhu hwemagreenand masisitimu. Zvekukanda zvinoda macores iyi inova nyaya hombe sezvo masisitimu mazhinji akasarudzika anoshandiswa kugadzirwa kwepamoyo uye izvi zvinofanirwa kutariswa kana uchidzora ese ari maviri macalaceaceous mazinga uye kuwanda kwese kwejecha system.
Iwo mapatya anokanganisa kuwedzera kabhoni uye kurasikirwa-on-kuvesa uye yakazara jecha grading inoda kunyatsonzwisiswa uye kutonga. Maitiro akasiyana-siyana ekudzora anoongororwa kusanganisira echinyakare nzira dzakadai sekutsvaira uye kurasikirwa-on-kuvesa pamwe ne bentonite kutsunga nzira uye nzira dzekutapa. Maitiro matsva ekudzora senge yakazara kabhoni anoongororwa pamwe neepasuru yekuyedza uye yekudzora nzira.
Nzira dzakasiyana siyana dzekufungidzira dzinotariswa sechinhu chekutonga zvakare Hunhu hwezvinowedzera uye basa ravo uye zvakanyanya kukosha kudyidzana kwavo kwakasimbiswa, sezvo ino iri nzvimbo inowanzo regedzwa sevatsigiri varume kurwira kuti vabudirire mune inoenderana mhando yekukanda. Dzakakurudzirwa mu-dzinouya kudzora bvunzo dzinokurukurwa dzakabatana kune zvinowedzerwa pamusanganisi.
Zvakare kuongororwa ndiko kududzirwa kwemhedzisiro uye chiito chinodiwa kuve nechokwadi chekudzora uye zvakanyanya kukosha kupindirana kwemhando yepamusoro kubva kumagreenand masisitimu nekusimbisa kunzwisiswa uye kudzora kweakabhoni yekuwedzera pakukanda mashandiro.
Post nguva: Nov-20-2020
Kutanga Yako Jurney
4th pasi pehofisi yekuvaka hofisi, # 355 Xinhua mugwagwa, Shijiazhuang, China. 050051